सामूहिक विष सेवन : परिवारकै औंठाछापसहित सुसाइड नोट- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कोइला बाल्दा निसासिएर ५ को मृत्यु
कोइला, दाउरा, ग्यास हिटर, गिजर प्रयोगमा सावधानी नअपनाउादा उपत्यकामा दुई महिनामा १० जनाले ज्यान गुमाए
फाल्गुन २४, २०७८ लिला श्रेष्ठ
ललितपुर — ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका–४ नल्लुमा निसासिएर एकै परिवारका पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । ५५ वर्षीया काइँली स्याङ्तानको घरमा आइतबार राति उक्त घटना भएको हो ।
बिहान अबेरसम्म घरको ढोका नखुलेपछि छिमेकीले छोरी रोशनी घलानलाई खबर गरेका थिए । उनी आइपुगेर झ्यालबाट हेर्दा दुईदिने नवजात शिशुसहित परिवारका ६ जना सदस्य अचेत अवस्थामा भित्रै फेला परेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले प्रहरीलाई खबर गरे ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँ र इलाका प्रहरी कार्यालय कोन्ज्योसोमबाट खटिएका प्रहरी र जनप्रतिनिधि पुगेर ढोका खोलेर हेर्दा काइँली स्याङ्तान, सुत्केरी कान्छी बुहारी २२ वर्षीया सुष्मा, माइला छोरा विक्रम तथा बुहारी सिर्जनाका ९ वर्षीय छोरा आशिष र छोरी ५ वर्षीया आश्मा स्याङ्तान मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।
काइँलीका कान्छा छोरा २३ वर्षीय सुवास र उनका दुईदिने शिशु अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए । उनीहरूलाई पाटन अस्पताल पुर्‍याइएकामा शिशुको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो भने सुवासको गणेशमान सिंह अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेको वडाध्यक्ष तीर्थबहादुर घलानले बताए । ‘आइतबार साँझ सुत्केरीलाई खाना खुवाईवरी मकलमा कोइला बालेर सबै जना एउटै कोठामा सुतेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘नसोचेको घटना भयो ।’
शनिबार शिशुलाई जन्म दिएकी सुष्मा शिशुसहित आइतबार मात्रै प्रसूति गृहबाट डिस्चार्ज भएकी थिइन् । त्यसपछि बेलुका खाना खाएर स्याङ्तान परिवार मकलमा कोइला बालेर एउटै कोठामा सुतेका थिए । ‘हावा नछिरोस् भनेर झ्यालसमेत बोराले बारेर सुतेका रैछन्, बान्तासमेत गरेको पाइएको छ,’ ललितपुर प्रहरी प्रवक्ता एसपी सिद्धिविक्रम शाहले भने । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका फरेन्सिक चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै उनले कोइलाबाट निस्किएको धूवाँले निसासिएर मृत्यु भएको जानकारी दिए । काइँलीका जेठा छोरा ३८ वर्षीय राजु भने अर्कै घरमा सुतेका थिए । माइला छोरा विक्रम र बुहारी सिर्जना वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशमा छन् । उनीहरूका छोरा आशिष र छोरी आश्माको पनि मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौं प्रहरीका अनुसार कोइला, दाउरा, ग्यास हिटर, गिजरलगायतका कारण उपत्यकामा दुई महिनामा १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जाडोयाममा कोठा न्यानो पार्न बालिने कोइला, दाउरा, ग्यास हिटर, हलोजन हिटरबाट धेरैको ज्यान जाने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । चिकित्सकका अनुसार कोइला, दाउरा तथा ग्यास उपयोग गर्दा निस्कने ग्यास कार्बनमोनोअक्साइड हो । जुन देख्न, सुँघ्न र महसुस गर्न सकिँदैन । ग्यास बाहिर जान नपाएपछि कहिलेकाहीँ मानिसको निसासिएर अचानक मृत्यु हुने गरेको भक्तपुर अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डा. कुन्दनसिंह कार्कीले बताए । कोठा गुम्म पारेर मकल, आगो तथा हिटर बालेको कोठामा सास लिँदा त्यसबाट निस्किएको कार्बनमोनोअक्साइड फोक्सोमा जान्छ । फोक्सोले रगतका कोषिकाहरूमा अक्सिजन पुर्‍याउने काम गर्छ । कार्बनमोनोअक्साइड ग्यास प्रवेश गरेपछि फोक्सोले रगतका कोषिकाहरूमा कार्बनमोनोअक्साइड पुर्‍याउँछ । त्यसले रगतमा रहेको रक्तकोषिकाबाट अक्सिजनलाई हटाइदिन्छ, जसको कारण कोषमा हुने आन्तरिक श्वासप्रश्वास प्रक्रिया बन्द हुन पुग्छ । ‘कार्बनमोनोअक्साइडले शरीरमा भएको अक्सिजन बाहिर फालिदिने गर्छ । त्यही कारण अक्सिजनको मात्रा घट्छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘मुटुको चालसमेत गडबड हुँदा मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।’
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले बिजुली, कोइला, दाउरा तथा ग्यासको प्रयोग गर्दा सावधानीका उपाय अपनाउन अनुरोध गर्दै आएको छ ।
पाँच जना बेहोस फेला, एकको मृत्यु
काठमाडौंको नागार्जुन–६, रामकोटमा सोमबार साँझ एकै परिवारका पाँच जना बेहोस फेला परेका छन् । तीमध्ये ३० वर्षीय सुवर्णमान प्रधानको मृत्यु भएको छ । अन्य चार जनाको सीतापाइलास्थित मनमोहन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख सुदीप गिरीले घटनास्थलमा विषको बट्टा र ‘सुसाइड नोट’ भेटिएको जानकारी दिए । ‘भित्रबाट चुकुल लगाइएको ढोका फोरेर पस्दा परिवारका सबै बेहोस अवस्थामा भेटिएका हुन्,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ गिरीका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका घर भई रामकोटमा डेरा बस्दै आएको उक्त परिवारले आर्थिक कारोबार बिग्रिएपछि आत्महत्या प्रयास गरेको अनुमान गरिएको छ ।
- हावा ओहोरदोहोर हुने ठाउँमा मात्र आगो ताप्ने/हिटर बाल्ने/गिजर प्रयोग गर्ने
- आगो ताप्दा वा हिटर बाल्दा कागज, कपडाजस्ता छिटो जल्ने सामग्री नजिकै नराख्ने
- गिजरको मुख्य मेसिनलाई बाथरूमबाहिर खुला ठाउँमा जडान गर्ने
- आगो तापिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रुपमा निभाउन नबिर्सने
- कोइलाजन्य स्रोतबाट सकेसम्म आगो नताप्ने
- सुत्नुअघि अनिवार्य रुपमा हिटर निभाउने
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७८ ०७:०४
दिलमायाको मृत्युपछि कोठाबाट भागेका थिए एक पुरुष
नुवाकोटमा लागूऔषध दुरुपयोग तथा ओसारपसारविरुद्ध प्रभातफेरी